Dowladda Federaalka oo agab loogu talogalay lasocoka is beddelka cimillada geysay Kismaayo. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR JUBALAND Dowladda Federaalka oo agab loogu talogalay lasocoka is beddelka cimillada geysay Kismaayo.
Dowladda Federaalka oo agab loogu talogalay lasocoka is beddelka cimillada geysay Kismaayo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo faah faahin ka bixisay horjooge lagu dilay duqeyn xagga cirka ah.
Next articleMadaxweynaha Hirshabeelle oo xariga ka jaray mashaariic laga fuliyay Degmada Warshiikh.+Sawirro.